एसाइलमको निर्णय अब चांडै हुने ! – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
एसाइलमको निर्णय अब चांडै हुने !
प्रकाशित: २०७४ माघ १७ गते २२:२७
वासिङटन डिसी (अमेरिका) – युनाइटेड स्टेट सिटिजनशीप एण्ड इमिग्रेसन सर्भिसेज (युएससिआइएस) ले एसाइलम (शरणार्थी) का आवेदकको निर्णयलाई २१ दिनभित्रै टुंग्याउने भएको छ ।
युएससिआइएसलले सूचना जारी गर्दै एसाइलमको अन्तरवार्ता प्रकृयालाई तीन वर्गमा बिभाजन गर्दै पहिलो प्राथमिकतामा कुनै कारणवश रद्ध गरिएकोलाई दिने भएको छ । त्यस अन्तरगत युएससिआइएस वा आवेदकको निवेदनका आधारमा पहिले तोकिएको समयमा स्थगित भएको अन्तरवार्तालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
त्यस्तै दोस्रो प्राथमिकता २१ दिनभन्दा थोरै समय पेन्डिङमा रहेका आवेदकलाई दिइने जनाएको छ । एसाइलमको लागि आवेदन दिएका व्यक्तिले फिङगर प्रिन्ट दिएपछि २१ दिनको सूचना दिएर अन्तरवार्ताको मिति तोकिएको हुन्छ । यस्ता व्यक्तिलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । यस अन्तरगत अबदेखि नयाँ आवेदकको प्रकृया असाध्यै छिटो गतिमा अघि बढ्ने भएको छ ।
विगत चार वर्षदेखि एसाइलमको आवेदक दिएपछि अन्तरवार्ताका लागि तीन वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको आवेदकहरुले बताएका छन् । एकसय ५० दिनभित्र अन्तरवार्ताको मिति नआएपनि आवेदकले वर्क परमिटका लागि आवेदन दिन पाउने र त्यसैका आधारमा काम गर्न पाउने व्यबस्था छ ।
तर अब आवेदक दिएको ४५ दिनभित्रै एसाइलम दिने नदिने निर्णय हुनेगरि युएससिआइएस अघि बढेको छ । त्यसले गर्दा अब अन्तरवार्ताको मिति नआएपनि वर्क परमिट पाएर काम गर्न पाउने अवस्था नहुने अवस्था आउनेछ । वर्क परमिट दिनुपर्ने अवस्थानै नआउनेगरि चाँडो अन्तरवार्ता लिएर टुंगो लगाउने नीति युएससिआइएसले लिएको छ।
युएससिआइएसले तेस्रो प्राथमिकतामा पुरानो पेन्डिङ आवेदकलाई दिने भएको छ । सयौँ नेपालीहरु समेत ३/४ वर्षदेखि एसाइलमको अन्तरवार्ता मिति नआएर कुरेर बसेका छन् ।
नयाँ प्रावधानले एसाइलमलाई कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । अबदेखि कोही व्यक्ति वैधानिक वा अवैधानिक बाटोबाट अमेरिका आएको खण्डमा चाँडोभन्दा चाँडो निर्णयमा पुगेर एसाइलमको योग्यता नपुगेकाहरुलाई संबन्धित देशनै फर्काउने संकेत दिएको छ । यसले गर्दा पहिले जस्तो एसाइलम सहज रुपमा पाउन कठिन हुने भएको छ ।
नेपालमा माओवादी द्वन्द्वको समयमा धेरै नेपालीले एसाइलम प्राप्त गरेर त्यसबाट ग्रीनकार्ड लिएका छन् । त्यतिखेरको द्वन्द्वलाई आधारमा मानेर अहिले पनि धेरै नेपालीले आवेदन दिँदै आएका छन् । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इमिग्रेसनमा सुधार गर्ने घोषणासँगै एसाइलममा पनि कडाई गर्ने संकेत मिलेको छ ।